लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा सुरुभयो डायलासिस सेवा
/ २०७६, २१ पुष सोमबार ११:२८ प्रकाशीत
सुचना डबली संबाददाता, पौष २१ बुटबल/लुम्विनी प्रादेशिक अस्पताल बुटबलमा सोमवार डायलोसिस सेवा शुभारम्भ भएको छ । डायलोसिस सेवाको एक कार्यक्रममा बिच प्रदेश ५का सामाजीक बिकास मन्त्री शुदर्शन बरालले शुभारम्भ गरे ।
डायलोसिस सेवा शुभारम्भ कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री बरालले विरामी भएर अस्पताल आउनु पुर्व मृगौला सम्वन्धी जनचेतना जगाउन आवश्यक रहेको बताएका छन ।
उनले लुम्बिनी प्रादेशीक अस्पतालमा सेवा थप गर्दे लैजाने बताएका छन । यसै बर्ष अस्पतालमा न्युरो सेवा बिस्तार गर्न गरेको बताए । मन्त्री बरालले हेमोडायलोसिस मात्र नभएर सबै सेवाको निरन्तरता जरुरी रहेको बताएका छन ।
मन्त्री बरालले जनताको किडनी बचाउनु सरकारको काम हो । बिभिन्न बाध्यताले आउन छन ठिक ढगले उपचार गर्नु सरकारको कर्तब्य रहेको मन्त्रीको भनाई छ ।उनले एक जनामात्र नभएर समग्र टिमको कामबाट सफता मिल्ने भएकोले सबैजिम्बेवारीका साथ लाग्नुपर्ने बताए ।
सेवा सुभारम्भ कार्यक्रममा लुम्विनी प्रादेशिक अस्पताल प्रमुख डा राजेन्द्र खनालले यस क्षेत्रको आशाको केन्द्रबिन्दु अस्पताल भएकोले सेवाको बारे सबैलाई सुसुचित गर्ने दाईत्यो भएको बताए । डा खनालले अस्पतालको सेवामा कुनै कमीहुन नदिने बताए ।
लुम्बिनी प्रादेशीक अस्पतालका हेमोडायलोसिस बिभाग प्रमुख डा शक्ती बस्नेत डायलोसिस सवाको बारे जानकारी गराएका थिए । डा बस्नेतले अहिले ५ बेडबाट यो डायलोसिस सेवा दिने र पछि आबश्यकता अनुसार थप गर्दे लैजाने बताए।
कार्यक्रममा सामाजीक बिकास मन्त्रालयका सचिब डा गोपिकृष्ण खनाल स्वास्थ्य निर्देशक डा बिनोद कुमार गिरी सामाजीक बिकास मन्त्रालय स्वास्थ्य महा शाखा प्रमुख डा उमा शंकर चौधरी लगायको सहभागीता रहेको थियो ।कार्यक्रमको संञ्चालन नर्सिड अधिकृत ज्योति पौडेल गरेकिथिईन ।
भोलिदेखि बालबालिकालाई खोप लगाइने
स्वास्थ्य बीमा आफैँ बिरामी
भारतमा २४ घण्टामा तीन हजार १५७ जना कोरोनाका नयाँ सङ्क्रमित
३. ‘कछुवा गति’मा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना
४. टनकपुर सन्धि भएको २६ वर्षपछि पानी नेपालमा